Somali News 06.17.21 | KWIT
Dacwadda ay soo gudbiyeen milkiileyaashu waxay ku eedeeyeen warshadda inay u dirtay qiiqa qulqulaya nidaamka bullaacad ee magaalada ayna burburisay guryahooda.
Big Ox wuxuu bilaabay hawlgalkiisa bishii Sebtember 2016, isagoo kala soocaya adkaha biyaha wasakhda ah si loo abuuro loona iibiyo methane. Waxaa loo daliishaday xadgudubyo badan oo xagga deegaanka ah illaa laga xirayo sannadka 2019-ka.
Saraakiisha caafimaadka ee waqooyi-bari Nebraska waxay ogaadeen culeys cusub oo ah COVID-19. Kala duwanaanshaha Delta wuxuu ka yimid Hindiya waxaana la rumeysan yahay inuu si fudud ku faafo.
Nebraska waxay soo dhowaaneysaa iyadoo 70% dadka qaangaarka ah laga talaalay coronavirus laakiin xawliga ay u socoto qeybinta rasaasta ayaa hoos u sii dhaceysa. CDC-da ayaa sheegtay in qiyaastii 63% ee Nebraskans 18 iyo wixii ka weyn ay heleen ugu yaraan hal talaal ilaa Jimcihii. Heerkaasi wuxuu ku jiraa kaalinta 24aad dhammaan gobollada.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa ka digay in kasta oo kiisaska coronavirus ay hoos ugu sii dhacayaan heerarka ugu hooseeya tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee cudurka safka, haddana gobolku wuxuu arki karaa dib u soo noqoshada fayraska xilliga dayrta haddii aan dad ku filan la tallaalin.